မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: December 2008
Making Firefox Extensions force compatible with new versions
1. download .xpi file to local machine (xpi same format with zip)
2. open with 7-zip (can open with anything which can browse and save zip files also like WinRAR)
3. edit with editor
4. modify max version to 3.* (its mean 3.1, 3.2, ... ok)
6. save the zip file (it will ask you when you close editor)
7. click and drag .xpi file into your firefox and install
9. enjoy! :-)
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, December 31, 20082comments
ကဏဿဍ : Browser, Tips
New Features from 3.1
- Thumbnail shortcuts
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, December 31, 20080comments
ကဏဿဍ : Browser, Linux-Unix, x64
Firefox 3.1 will have Private Browsing like Google Chrome.
ps# FF3.1beta3pre is out.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, December 28, 20082comments
9 Holidays from today. MaybIts longest holidays I have in Japan.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, December 27, 20082comments
မနက်ဖြန်နဲ့ သန်ဘက်ခါ ၂ရက်ပိတ်တယ်။ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။ မနက်ဖြန်ကပိတ်ရက်။ သန်ဘက်ခါကတော့ ခွင့်ယူထားတာ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ စတော့ လုပ်ရမယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, December 22, 20083comments
If you don't have Japanese Input Method, use Japanese Web Ajax IME.
And, If you don't have Burmese / Myanmar Input Method, use Burglish :D :P
No need to install anything. All you need is font and your favorite Browser :D
ps# I don't have Language bar, I use them, seriously!
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, December 22, 20080comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, December 22, 2008 1 comments
လခ ၂ဆလောက်လိုချင်တယ်။ :D
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, December 22, 2008 8 comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, December 21, 2008 1 comments
အလုပ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ StandBy တနေကုန် ထိုင်နေရတာဟာ အင်တာနက် နဲ့ Drinks ရှိနေလည်း သိပ် ဘဝင်မကျပေဘူး။
ဂျပန် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ ဘဏဿဍာရေး။ ငွေကြေးကပ် တိုက်ရိုက်ကျရောက်
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ငွေကြေး ခန့်မှန်းချက်။
စီးပွားရေး ပျက်သုန်းမှုရဲ့ အလျှင်မြန်မှုတွေ၊ နိုင်ငံငွေကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားလာမှုတွေကြောင့် ယေဘုယျခန့်မှန်းချေအနေနဲ့ သမိုင်းတလျှောက် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ ၈၈.၅ ထရီလီယမ် ယန်းကို ရောက်ရှိတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပြင့် အခွန်တွေဝင်တာလဲ နည်းလာပါတယ်။
အခြား နိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေ တွေလည်းနဲလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံအကြွေးဟာ ၃ဝထရီလီယမ် ယန်းကို ကျော်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခွန် ၇.၅ ထရီလီယမ် ယန်းလျော့ကျ၊ ကုမဿပဏီတွေ ပျက်သုန်းကုန်မှုကြောင့်
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဘဏဿဍာငွေလက်ကျန်ဟာ (အကြွေးတိုင်းပြည်ကြီး ဂျပန်)ကို ပိုဆိုးသွားအောင် ဆောက်နဲ့ ထွင်းသလိုပဲရှိပါတယ်။ ကုမဿပဏီတွေ ပျက်သုန်းကုန်မှုကြောင့်၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံမှ အခွန်ရငွေ ၄၆.၁ ထရီလီယမ် ယန်း ပဲ ရရှိပြီး ၇.၉ ထရီလီယမ် ယန်းလျော့ ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ အကြွေးစာချုပ် စာရင်းမှာတော့ ၃၃.၃ ထရီလီယမ် အထပ်မြင့်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအိဇုမိ သမဿမတ လက်ထက်က ထားရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအကြွေး ၃ဝထရီလီယမ် ယန်း အောက် လျော့ချရေးအစီအစဉ်ဟာ လေထဲမှာ ပျောက်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြွေးသစ်ပမာဏဟာ ၁.၃ ဆ ချက်ခြင်းတိုးသွားပြီး ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင် နိုင်ငံအကြွေးစုစုပေါင်းဟာ အဆိုးဆုံး အခြေအနေဖြစ်တဲ့ ၅၈၁ ထရီလီယမ် ယန်း အထိကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပုံမှန်အခွန်ပြန်ကောက်သွားရင်တောင် အကြွေး ၁၃နှစ် စာရှိနေပါပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နိုင်ငံအကြွေးတွေ တိုးလာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ကမဿဘာစီးပွားရေးပျက်ကပ်၊ စီးပွားရေးနှင့်အတူ ယန်းတန်ဖိုးမြင့်တက်မှု၊ လုပ်ငန်းဝင်ငွေက မှန်းထားတာထက် ပိုဆိုးရွားသွားမှု တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုနီ၊ တိုယိုတာ စတဲ့ နိုင်ငံ ထိပ်သီးကုမဿပဏီတွေ ကစပြီး ဆက်တိုက် အဆင်မပြေဖြစ်လာမှုတွေကြောင့် လုပ်ငန်းအတော်များများဟာ တည်တည်းလေးသာ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဘဏဿဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ရဲ့ လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေ ၁ဝ.၅၄၄ ထရီလီယမ် ယန်း (၂ဝဝ၈ တုန်းက ၁၆.၇၁၁ ထရီလီယမ် ယန်း) အထိကျသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ ဒါဟာ များနေပါသေးတယ်။ ၁ဝ ထရီလီယမ် ယန်း အောက် အထိကျသွားဖို့များပါတယ် လို့ထင်မြင်ကြပါတယ်။
နောက်ပြီး စတော့ ဈေးကျမှု နဲ့ စားသုံးသူတွေ ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ဝင်ငွေခွန်နဲ့ ပစဿစည်းခွန် ရရှိမှုတွေဟာလည်း လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
အခွန်ရရှိမှုက လမ်းပျောက်နေတဲ့ကြားက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ အိမ်ဝယ်ရန်ထုတ်ချေးငွေ အတိုးလျော့ချပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝ.၅၉ ထရီလီယမ် ယန်းလောက် ရတာလျော့သွားဦးမှာပါ။
အစိုးရနဲ့ အခြားပါတီတွေဟာ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အစီအစဉ် တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ စီစဉ်ကြပါမယ်။ အခွန်တွေ တိုးကောက်လို့ ရမလား ဆိုတာကလည်း မသေချာသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဟာ အနာဂတ်ကို မြင်ကြည့်လို မရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, December 21, 20080comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, December 18, 20082comments
ကဏဿဍ : Security
Oops! Who knows Euro will left over Pounds
its almost 1 ~ 1 now.
Dollar Down too much. Dollar dragging Chinese Yuan, Hong Kong Dollars.
Euro is going up.
Yen downs also when compare to Euro.
Imm, what will happen next?
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, December 18, 20080comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, December 17, 20083comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, December 16, 20084comments
ဘဝဆိုတာ အစကတည်းက မမျှတဘူး။ လူတွေကသာ မမျှတဘူးဆိုတာကို လက်ခံပြီး
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, December 16, 20080comments
အလုပ်တစ်ခုကို မျှော်လင့်ချက် တခုခု နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ရင်းကို
မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာ လူသိသွားရင် လူတွေက မပျက်ပျက်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, December 16, 2008 1 comments
လူတကာရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံယူချင်ရင် လူ့အောက်ကျို့ခံချင်ခံရမယ်။
လူတွေကို ဦးဆောင်ချင်ရင် အနစ်နာခံချင်ခံရမယ်။
အဲတာတွေ လုံးဝ မလိုအပ်ဘူးဆိုမှာသာ လုပ်ချင်သလိုလုပ်။
လူတွေကို ဂရု မစိုက်လဲရတယ်။ ဆဲချင်လဲဆဲနေ။ ဘယ်သူမှ လှည့်ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲ.. လူ့ဂရုစိုက်ခံချင်ပြီ ဆိုရင် တော့ မတတ်သာတော့ဘူး။ သင့်မှာ
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, December 16, 20083comments